Transitions in your life Vol.2Changes by transitions | Mycanvas
Transitions in your life Vol.2Changes by transitions
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ယခုတလောမှာတော့ တနင်္လာနေ့နှင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းမှာ ”Transition” အကြောင်းဖော်ပြပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ဖော်ပြပေးတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ “Transition” စီးရီးရဲ့ ဒုတိယဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ အသွင်းပြောင်းလဲမှုကပေးတဲ့ပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Transition မှာတော့ အဓိကအားဖြင့် ပြောင်းလဲမှု ၄မျိုးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ သင့်ဘဝရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ နေ့စဉ်ဘဝ နဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ်အသိအမြင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဘဝရဲ့အခန်းကဏ္ဍ : သင့်ဘဝရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ တစ်ခု (သို့မဟုတ်) အချို့ပြီးဆုံးသွားခြင်း / ပြောင်းလဲသွားခြင်း။
လူမှုဆက်ဆံရေး: တန်ဖိုးထားရတဲ့သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ အားကောင်းလာခြင်း (သို့မဟုတ်) အားနည်းသွားခြင်း။
နေ့စဉ်ဘဝ: ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့အရာများပြောင်းလဲသွားခြင်း
မိမိကိုယ်ကိုယ်အသိအမြင်: သင့်ကိုယ်သင်နားလည်မှုကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်း၊ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အယူအဆကိုပြောင်းလဲခြင်း။
အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေနဲ့ သင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ ပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာတွေဟာ အထက်မှာဖော်ပြပေးသွားတဲ့အချက်၄ချက်ထဲက တစ်ခု (သို့မဟုတ်) တစ်ခုထက်ပိုပြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အပြောင်းအလဲတွေကသင့်အတွက် ကောင်းတဲ့ဘက်ရော ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုပါ သက်ရောက်နိုင်သော်လည်း ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်သင်ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုကိုင်တွယ်ရန်ကျွမ်းကျင်မှုရှိလျှင် တူညီသောအခြေအနေမှဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင် ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာကိုဓမ္မဓိဌာန်ကျကျနားလည်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အသွင်ကူးပြောင်းမှုကြောင့်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာကိုအောက်ပါအချက်သုံးချက်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်အကူးအပြောင်း (ဖြစ်ရပ်(သို့)ဖြစ်ရပ်မဟုတ်သော)၊ သင့်မှာရှိသောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဖြေရှင်းချက်၊ သင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုရင်ဆိုင်ရသည့်အခါသင့်ကိုဝန်းရံထားသောအထောက်အပံ့များ ပဲ‌ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရှုထောင့် ၃ ခုမှသင့်လျော်သောအခြေအနေကိုသင်နားလည်နိုင်ပါတယ်။ အသွင်ကူးပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်ကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်…